Uyilungiselela njani iFriji ngamanyathelo alula ama-8 - Iingcamango Zegumbi
Uyilungiselela njani iFriji ngamanyathelo alula ama-8
Isithako sokuqala esibalulekileyo se ikhitshi elifanelekileyo ? Ifriji ehlelwe kakuhle. Bukela indlu entle isifundo sevidiyo somboniso obonakalayo, okanye funda iingcebiso zethu ezibekwe ngamanyathelo asibhozo alula. Emva koko, qiniseka ukuba uyokuthenga yonke ifriji etshintsha ubomi umbutho kunye nokutya yokugcina iimveliso-ewe, ziya kuyenza ngokwenene tshintsha ubomi bakho bemihla ngemihla bube ngcono, njengoko uza kuba nakho ukugcina imveliso yakho intsha ixesha elide, uzulazula kwifriji yakho (kunye nayo yonke ikhitshi ) ngcono, kwaye ulungiselele ukutya okungcono.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Coca kwaye uyiCime Iimpawu eziCocekileyo IBlueland$ 39.00 THENGA NGOKU
Izinto kufuneka zisiba mbi ngaphambi kokuba zibengcono ... Ke, ngaphambi kokuba uzilungiselele, qala ngokususa yonke ifriji yakho kwaye uyicoce ngokufanelekileyo ukuze uqale ngokutsha.
Ukunyamekela i-poinsettia ngaphakathi
Mbini Iziqhamo ezahlukileyo kunye neMifuno Iingxowa zeMveliso ezinokuphinda zisetyenziswe Ukutya52$ 29.00 THENGA NGOKU
Qiniseka ukuba ifriji yakho kunye namacandelo ayo ahlukeneyo asetelwe amanqanaba okufuma afanelekileyo kwaye ugcine iziqhamo zakho kunye nemifuno yahlukile kwesi sizathu ngqo (iziqhamo zikhetha amanqanaba asezantsi obumanzi). Ukwahlula iidrawer zokutya ezahlukeneyo (ngokuqinisekileyo enye yeziqhamo, kunye nenye yeveggies).
3 Fumana okuseleyo kwakho ngokulandelelana Iseti yokuGcina iglasi yePyrex® UWilliam Sonoma$ 62.95 THENGA NGOKU
Ukuba ulungiselela ukutya okanye iodolo ithatha okuninzi, qiniseka ukuba unendawo echongiweyo eseleyo. Kodwa ayipheleli apho: Kuya kufuneka uqiniseke ukuba uzigcina ngendlela eyiyo. Ezi zitya ziyagubungela zilungile ukuba awufuni kudlulisela nantoni na kwezinye izikhongozeli.
4 Khangela indawo yobisi kunye namaqanda Anikki Studio yodongwe Iqanda Isiphathi Etsy$ 63.00 THENGA NGOKU
Beka ubisi namaqanda akho eshelufini, hayi kwigumbi lomnyango osecaleni — gcina loo ndawo kwezixhobo zakho. Ukuba awunasithuba kwishelufa enye ngenxa yezinye iziselo ezifuna ukongezwa, ungabeka amaqanda akho kwishelufa ephezulu.
5 Beka inyama kwitreyi Marble omnyama uLazy Susan Indawo yokugcina izinto zobumba$ 69.50 THENGA NGOKU
Iinyama kufuneka zigcinwe kwishelufa esezantsi ukuthintela nakuphi na ukuvuza okufikelelayo kokunye ukutya. Kwaye ukuba ukhathazekile malunga nokutsiba okanye ufuna ukunciphisa ukucoca ifriji, beka itreyi phantsi kwazo. Kanangcono? USusan olivila ukuze ubambe kwaye uhambe ngokukhawuleza.
6 Gcina iibhotile zakho Umgcini wewayini Umgcini weFriji Ivenkile yeContainer$ 9.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Inyani emnandi: Iwayini kufanele ukuba igcinwe ngokuthe tye, ke indawo encinci kwifriji yakho yokubanda iya kwenza iqhinga. Ukuba ungumntu osela iwayini, ungalibali eli nyathelo. Beka iwayini kwizibambi ezinokuxinana ukuze bathathe indawo encinci, beka konke okuseleyo kwizikhongozeli ezineziciko ezivuzayo kwindawo yabo. Unokusebenzisa ezi zinto ukugcina ezinye iibhotile.
7 Gcina iiHerbs zakho ngokufanelekileyo ICuisipro Herb Keeper Ivenkile yeVeri$ 20.00 THENGA NGOKU
Ukuba unayo nayiphi na imifuno efuna ifriji, yikhuphe ngaphandle kwiphakheji xa sele ivuliwe kwaye uyibeke kwindebe yeglasi okanye isikhongozeli esinamanzi amancinci. Ezinye izinto zinokuxhamla ngokugcinwa kwizikhongozeli okanye kwiingxowa zeemarike, ezifana neletisi kunye namayeza.
8 Tuck Iimpahla eziNcinci ziMka Itafile yeglasi yokuPakisha iiglasi Ivenkile yeWebhu$ 10.64 THENGA NGOKU
Izinto ezinqiniweyo, iisosi ezenziwe ekhaya, kunye nayo nayiphi na into enegwele kufuneka igcinwe kwiingqayi zeglasi kumnyango osecaleni okanye kwishelufa ephezulu, apho zingadingi ukuphakama okufanayo nezinye iimveliso.
imibala yeendonga zangasese
Kwaye voilà! Ifriji yakho icwangcisiwe ngoku.
iintlobo ezahlukeneyo zeminyango
uyilo lweemifanekiso zodonga
mhlophe ekhitshini elimhlophe
ngaba ucebisa ngemibhobho yamanzi